Qaybta miiraha ee sifaynta biyaha waa in si joogto ah loo beddelaa. Suurtagal ma tahay in la sii wado isticmaalkeeda? Waad fahmi doontaa ka dib akhriska
Waxaa qoray admin on 20-07-09
Cunsurka miiraha ee biyaha lagu nadiifiyo ee guriga lagu rakibay ayaa si isdaba joog ah loo beddelaa. Ma dhaqi karaa oo ma sii wadan karaa isticmaalkiisa? Tani ma fiicna! badbaadada isticmaalka biyaha guud ahaan, Waxaan aaminsanahay in qoysas badan ay rakibeen biyo sifeeyeyaal. Biyaha tuubada ayaa qulqulaya ...
Ku beddel “shaandhada shaandhada” sifaynta biyaha gurigaaga. Xusuusnow inaad soo noqoto oo aad cabto "biyo nadiif ah"!
Hadda xaaladaha nololeed ee dadku way soo fiicnaanayaan oo way sii fiicnaanayaan, waxayna bilaabeen inay ku daba galaan tayada nolosha. Iyadoo aan loo eegin inaad wax cunayso, wax cabayso ama aad isticmaalayso nolosha, waxaad u baahan tahay inaad caafimaad qabtid, haddii loo baahdana, waxaad isticmaali doontaa mashiinno qaar ah oo kaa caawiya, si aad ...
Sifeeyaha biyaha waxtar ma leeyahay? Maxaa loo hor dhigayaa suufka PP? Xinpaez wuxuu kugu qaadanayaa inaad fahanto miiraha cudbiga pp
Inta badan biyaha lagu nadiifiyo guryaha, qeybta koowaad ee shaandhada waa aaladda miiraha suufka PP. Qaybta miiraha heerka koowaad si toos ah uma saameyso tayada biyaha, laakiin sidoo kale waxay saameyneysaa saameynta soo socota ee seddex-marxaladood ama afarta-heer ah iyo nolosha fi ...